IXH054A | Moutik
Ifowuni yeTafile yefowuni ephethe iAluminium ingxubevange yeselfowni Yima
I-Universal Desktop Ifowuni yokuma kweThebhulethi ye-5 "-12" Itheyibhile yefowuni yeCwecwe yeNtaba yokuma kweGT0047
Adaptable Multi-Angle Laptop Stand Iyahambelana neMacBook Pro / Air, Apple Laptop, 11-15.6 "Incwadana kunye neThebhulethi yeDesktop yokuGcina isiXhobo nge-Anti-Slip Silicone Pad GL054A
Ukuphakanyiswa kwe-Silicone anti-slip edge kunye neepilicone pads.
Iqondo le-18 lokuma kweLaptop yokuma ukuphakama kukhuthaza ukuma kakuhle kwaye kunciphise ubunzima emehlweni nasentanyeni.
UKULUNGELELANISEKA NGOKUQINISEKILEYO: Indawo ekumaxhaphetshu eMoutik ilungele naziphi na iilaptops eziphakathi kwe-11- 15.6 ", njenge-Apple Macbook, iMackbook Air, iMacbook Pro nezinye.
Uyilo lwe-ERGONOMIC: I-Laptop riser yedesika ikunika i-angle efanelekileyo yokuchwetheza kunye nokujonga ukuthomalalisa iintlungu zentamo negxalaba.
& IBHODI ELIQINILEYO LEALUMINUM: Ukuma okuqinileyo kwekhompyuter yealuminium kunika uzinzo olunesidima kwaye iiphedi zesilicon ezityibilikayo ziya kuyikhusela ngokufanelekileyo ilaptop yakho kumonakalo.
UKUQHUBA UKUPHATHWA: Uyilo olusongekayo kunye nobunzima bokukhanya (malunga ne-25oz) yenza kube lula ukubeka le tafile yeelaptop ebhegini yakho kwaye uyise eofisini, ibha yekofu naphina apho ufuna ukuya khona. Kunye netafile yelaptop yokuphumla ebhedini okanye esofeni.
& SAVE SPACE: Indawo yolawulo lwentambo ngasemva kwesi siza sokuma ivumela ukucwangcisa intambo yokutshaja ngokucocekileyo kwaye inqaku elisongekayo linceda ukugcina indawo yokwenza indawo elula necocekileyo ngelixa ingasetyenziswa.
Indalo iphela yefowuni ene-5.8-10 ububanzi
Iintsuku ezi-3-7 emva kokuqinisekiswa komyalelo wokuthenga
- Nceda ujonge kwimilinganiselo. Impazamo yokulinganisa encinci ivumelekile kuluhlu oluqhelekileyo.
-Kunokubakho umahluko omncinci wombala ngenxa yokubek'esweni, ikhamera okanye ezinye izinto, nceda ujonge kwinto ebonakalayo.
1 x Itafile yeTafile yeFowuni
Ukuthengiswa kwefowuni eshushu kunye noSomlomo FD2
Idesktop Imfono-mfono enguMgcini yokuma kweFowuni kunye neThebhulethi yesiphatho seAluminiyam esiLungelelanisiweyo seDesktop
I-2021 I-Heather yeTeknoloji yeTeke lePhezulu lePiectop ye-Laptop fartmer
I-Aluminium Mini Desk yokuma, Iselfowni esongiweyo enesiphatho ngePhepha leSilicone leThebhulethi ye-iPhone7, 7 kunye ne-iPhone6, 6s, Samsung, iNintendo Shintsha i-GL046